Everestmission | हरपल खबर, निष्पक्ष विश्लेषण चार मन्त्रीले शासन चल्छ ? दैनिक प्रशासनिक कार्यसञ्चालनमा अप्ठ्यारो
चार मन्त्रीले शासन चल्छ ? दैनिक प्रशासनिक कार्यसञ्चालनमा अप्ठ्यारो
१० असार २०७८, बिहीबार ०७:४२
काठमाडौँ, १० असार । सर्वोच्च अदालतले जेठ २१ र २७ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई मंगलबार बदर गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वेच्छाचारी यात्रामा अंकुश मात्र लागेको छैन, उनका लागि दैनिक प्रशासनिक कार्यसञ्चालनमा समेत अप्ठ्यारो स्थिति आइपरेको छ ।
बालुवाटारमा मंगलबार निवर्तमान मन्त्रीहरूको बैठक राखेर अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ओलीले भनेका छन्, ‘के चार जना मन्त्री लिएर सरकार सञ्चालन गर्न सकिन्छ ?’ प्रधानमन्त्री आफैंले गरेको यो प्रश्नले उनलाई अब परेको अप्ठ्यारो कति छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २२ वटा मन्त्रालय छन् । तीमध्ये चार वटामा मात्र मन्त्री छन् । राजनीतिक नेतृत्वविहीन भएका १८ मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत प्रधानमन्त्री ओलीको काँधमा आइपरेको छ ।
अहिले बाढीपहिरोको विपद्का बेला धेरै समन्वय गर्ने मन्त्रालय गृह हो । कोरोना महामारीसम्बन्धी काम गर्ने मुख्य मन्त्रालय स्वास्थ्य हो । यी मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बन्दा तत्कालै समस्या देखिन सक्छ । ओलीले मंगलबार र बुधबार आफूनिकट नेताहरूलाई विपद् र कोरोना महामारी नियन्त्रणका काममा अप्ठ्यारो पर्न सक्ने किटान नै गरेर अदालतप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ‘अदालतले नै सबै नागरिकलाई खोप लगाऊ भन्छ अनि त्यही काम गर्ने निकायमा चाहिँ मन्त्री राख्न पाइँदैन भन्छ, यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्न सकिन्छ ?’ ओलीले नेताहरूसँगको ब्रिफिङमा भनेका छन् ।
निवर्तमान गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले कार्यपालिकाको कामलाई अवरोध गर्ने गरी अतिरिक्त न्यायिक सक्रियता भएको टिप्पणी गरे । ‘यो स्थितिले मुलुकको शासकीय कामकारबाहीमै व्यवधान खडा गरेको छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने । अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीबाटै सरकारका सबै काम हुन सक्छन् तर विभागीय मन्त्री नहुँदा कामकारबाहीमा सहजता हुँदैन । महामारी र विपद्लगायत काममा छिनछिनमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन कामका लागि मन्त्रालयका अधिकारीहरू प्रधानमन्त्रीकहाँ पुग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । मन्त्रीस्तरबाटै हुने कामका लागि पनि अब प्रधानमन्त्रीले नै ‘डिल’ गर्नुपर्ने भएको छ । ओलीले चार मन्त्रीलाई थप जिम्मेवारी तोक्न पनि सक्छन् तर यस विषयमा उनले बुधबारसम्म निर्णय गरिसकेका छैनन् ।
अदालतको आदेशका कारण दैनिक काममा समेत समस्या परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई कार्यकारीका काममा न्यायपालिकाको हस्तक्षेपका रूपमा अर्थ्याएका छन् । ओलीनिकट नेताहरूले विगतका अभ्यासलाई अदालतले नहरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘यो अप्रत्याशित र अस्वाभाविक आदेश हो,’ पूर्वकानुनमन्त्री समेत रहेका एमाले नेता अग्नि खरेलले भने, ‘अहिले कसैलाई यो आदेश राम्रो लागेको होला तर यसले सिस्टममा दूरगामी प्रभाव पार्छ ।’
२०६९ सालमा शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए । त्यो बेला अदालतले यसलाई कार्यकारीको अधिकार भनी व्याख्या गरेको थियो । २०६७ सालमा माधवकुमार नेपालले राजीनामा गरेर कामचलाउ भइसकेपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए । यी उदाहरण ओलीनिकट नेताहरूले उल्लेख गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै, गत पुस ५ मै पनि ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । त्यस विषयमा अदालतमा नै विचाराधीन रहेको मुद्दालाई नजोडी मंगलबार फरक खालको व्याख्या गरिएको उनीहरूको तर्क छ ।
आदेश अप्रत्याशित भए पनि यसलाई मानेर जानेमा ओली स्पष्ट छन् । उनले कम्तीमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म यथास्थितिमै काम गर्ने र त्यसपछि आदेश जस्तो आउँछ त्यसअनुसार अघि बढ्ने भन्दै ब्रिफिङ गरेका छन् । उनले जसपाका नेताहरूलाई समेत त्यतिन्जेल धैर्य गर्न भनेका छन् । अदालतबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा अन्तिम फैसला आउन अझै केही दिन लाग्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तामा आएपछि प्रशासनिक तहका अधिकारहरू केन्द्रीकृत गरेका थिए । उनले प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका अधिकार राजनीतिक नेतृत्वमा ल्याएका थिए । त्यसैले साना काम पनि मन्त्रिपरिषद्सम्म पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था थियो । त्यस्ता निर्णय गर्न फाइल बोकेर जाने मन्त्रीहरू अब छैनन् । ओलीले विगतमा मन्त्रीहरूलाई कज्याउन मन्त्रिपरिषद् र आफूलाई शक्तिशाली बनाएका थिए । तर मंगलबार मन्त्रीहरू नरहने अदालतको आदेश आएपछि उनी चार जना मन्त्री राखेर कसरी सरकार चलाउन सकिन्छ र भन्ने प्रश्न गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।